Ajụjụ - Shandong Kingoro Machinery Co., Ltd.
Olee otú ogologo gị pellet igwe ọrụ?
A: Anyị enweghị ike inye gị oge ọ bụla, mana ụfọdụ igwe pellet rere na 2013 ka na-arụ ọrụ ugbu a.
Ogologo oge ole ka akụkụ ya yi?
A: mgbanaka anwụ: awa 800-1000. rolgbọ ala: awa 800-1000. Mkpụrụ shei: 400-500 awa.
Ihe mgbanaka ahụ nwere okpukpu abụọ, mgbe otu oyi akwa gwụrụ, tụgharịa iji oyi akwa ọzọ.
Kedu nke kachasị mma maka usoro SZLH560 na usoro SZLH580?
A: Ma àgwà na-ekwe nkwa. Fọdụ ndị ahịa na-ahọrọ ụdị a, ụfọdụ ndị ahịa na-amasịkwa nke ọzọ.
Nwere ike ịhọrọ ya dịka ọnọdụ gị si dị.
Ọ bụrụ n'ịtụle maka ọnụ ahịa, usoro SZLH560 na-azọpụta obere, mana SZLH580 nwere arụmọrụ siri ike karịa, yana ogologo ndụ yana ọnụ ọnụ.
Enwere ihe ọ bụla achọrọ na ihe maka ịme pellet?
A: Ee. Osisi osisi bu osisi eji eme ihe nke eji eme Biolet. Ọ bụrụ na mkpofu osisi ndị ọzọ buru ibu ma ọ bụ ihe mkpofu ugbo, a ga-akụrisị ya n'ime obere iberibe, ihe na-erughị 7mm. Mmiri mmiri dị na 10-15%
Kedu nsogbu ndị nkịtị mgbe ị na-eji igwe pellet?
A: Dị nnọọ iche. Ma echegbula banyere ya, anyị nwere ihe magburu onwe mgbe-ire ọrụ. Nwere ike nweta nzaghachi n'ime awa 2 site na email, ekwentị, nduzi vidiyo, ma ọ bụ ọbụlagodi injinia esenidụt ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Olee ogologo oge nke àgwà nkwa?
A: All igwe nwere otu afọ akwụkwọ ikike, ma ọ bụghị gụnyere akụkụ ahụ mapụtara.
Enwere m ike ma igwe pellet naanị, o nweghi ihe nkwado ọzọ?
A: Ọ bụrụ na igwe pellet pere mpe, ee, n'ezie, naanị igwe pellet dị mma.
Mana maka imepụta nnukwu ikike, anyị na-atụ aro ka ị zụrụ akụrụngwa akụrụngwa iji hụ na arụmọrụ aha igwe
Kedu esi ewepu ma gbakọta mgbanaka wee nwụọ?
A: Mgbe ndị injinia anyị wụnye igwe, ha ga-azụ ndị ọrụ gị na saịtị ahụ. Ọ bụrụ na ịchọghị ọrụ nrụnye anyị, ị nwekwara ike iziga onye ọrụ gị na ụlọ ọrụ anyị maka ụgbọ oloko. Anyị nwekwara vidiyo doro anya na ntuziaka onye ọrụ iji nyere gị aka ime ya.
Kedu ụdị mmanu mmanu eji eme ihe na igwe pellet?
A: L-CKC220 maka gearbox, na nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ lithium isi griiz maka griiz mgbapụta.
Enwere ihe ndị dị mkpa a ga-etinyekwu anya maka oge izizi iji igwe ọhụụ?
Azịza: ị nwere ike lelee ozi niile dị na ntuziaka onye ọrụ.
Biko rụba ama, Nke mbụ, maka igwe ọhụụ, enweghị mmanụ dị na ya, ị ga-agbakwunye mmanụ achọrọ yana griiz maka mgbapụta na-eso akwụkwọ ntuziaka ahụ;
Nke abuo, biko cheta igweru onwu nke igwe pellet oge obula tupu ya emee ya ma mgbe emechara ya.
Egweri Machine N'ihi Wood, Osisi Crusher, Belt akwagharị Hammer Mill, Hammer Mill na oké ifufe, Anụ nri Pellet Mill, Ogige osisi ibe,